Ciyaaraha xaggaaga oo gebo gebo maraya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kooxda reer Göteborg, foto: Maxamed Xaaji
Ciyaaraha xaggaaga oo gebo gebo maraya
La daabacay tisdag 20 juli 2010 kl 12.07
Ciyaaraha kubadda cagta soomaalida Yurub oo haatan si gebo gebo iyo yaan la iga badin ah maraya ayaa waxa ka socdaa garoonka Spånga ee magaaladda Stockholm, halkaasoo ay in badan oo 12 kooxood oo kala socoday jaaliyadda soomaalieed ee ciyaaraha isku arkeen. Waxaana wareegga rubaca ah isku soo haray 4 kooxood.
Haddii aan dib u jaleecno is aragyadii dhacay toddobaadkii hore ayaa waxaa arkay kooxaha kala ah Rågsved oo ah koox ka dhisan Sweden iyo Bristol ooy adana ka socota dalka Ingiriiska. Kooxda Rågsved ayaa u 6-0 goolal ah ugu awood sheegtay kooxdii Bristol ee reer Uk. Kooxdan Rågsved ayaa iyadu waxaa ay tahay koox soo bandhigtay awood iyo ciyaar farsameysan oo ay kaga soo gudubtay kulumaddii ay horey u gashay. Isla aragaa ayaa waxaa is arkay iyagana oo garoonka ku hardamay dadweynuhuna ay daawanayeen hardankooda, kooxaha
Denmark iyo Nabada FC, waxaana halkaasi guusha ku raacday kooxda Denmark.
Maalintii axadda ayaa waxaa iyagana kulmay kooxaha Liecester United oo Ingiriiska ah iyo Sonpet (Finland) waxaana 3-5 ku awood sheegtay kooxda Finland. Kooxdan ayaa iyadda lafteedu tahay koox goolal qallo ah lugu leeyahay, kadib ciyaar ay la ciyaareen kooxdda Göteborg maalintii jimcihii loogaga badiyey 7-2 gool, taasina waa mida keentay in kooxdan ay boorsooyinka ka la laab laabtan tartan lugu soo koobay 2 toddobaad.
Kooxaha haatan u soo baxay wareegga 8aad ayaa waxey kala yihiin Qaran, Australia, Denmark, Dahabshiil, Oslo Stars, Leicester Utd, Göteborg iyo Bristol F, waxaana ay isku arkayaan qaab atoomaatik haddii Alla idmo.
Maanta oo tallaado ah ayaa waxaa ciyaari doono kooxaha Qaran Sweden iyo Denmark isla galabtaasina waxaa kala bixi doona Australia iyo Dahabshil Norway.
Berito oo arbaca ahina haddii Alla idmo waxaa loo kala bixi doona kooxaha Leicester Utd iyo Xidigaha Rågsved (Stockholm)
isla maalintaasna dhalinta reer Göteborg ee Neurtala kala hari doonaan kooxda reer Norway ee Oslo Stars.
Dhinaca kale waxaa hoolka lugu ciyaarro kubadda koleygga ee iskuulka Rinkeby si habsami leh uga socday ciyaarta kubadda koleyga oo ay ka qeyb galayeen shan kooxood oo ka kala socda, dalka Sweden, Denmark iyo Ingiriiska. Halkaasi ay ciyaarro xiiso lihi ku dhex mareen qaar ka tirsan kooxahaasi. Waxaa garoonka ka dhex muuqday ruug cadaayaddii xagga kubadda koleyga loogaga dambeeyey ee lahaa gabdho iyo wiilal.
Sabtida soo socda ayaa la soo gebo gabeyn doona ciyaarahan kubadda xagga soomaalida ee xagaag walba lugu qabto magaaladda Stockholm halkaasoo dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ee jaaliyadaha soomaalida sanad walba isku arkaan. Tartankan ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii dhidibada loo aasay waxaa ka soo qeyb galay dhalinyarro ka socotay dalka Australia oo ay ka muuqatay sida ay ugu faraxsan yihiin ka qeybgalka ciyaarahan oo ay masaafo dheer u soo galeen.